Fitsidihana: Biraon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Ukraine | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
Tokony hanao famandrihana ve ianao alohan’ny hahatongavanao mitsidika? Eny. Tianay raha manao famandrihana mialoha daholo izay te hitsidika, na firy na firy izy ireo. Tsy ho be loatra, amin’izay, ny mpitsidika sady ho azo antoka hoe hankafy an’ilay fitsidihana ny rehetra.
Amin’ny firy ianao no tokony ho tonga? Tsara kokoa raha tsy tonga alohan’ny fahefatr’adiny mialoha an’ilay fitsidihana ianao, mba tsy ho be loatra ny olona mifamezivezy.
Maharitra antsasak’adiny ilay fitsidihana misy mpitarika. Hazavaina amin’ny mpitsidika ny ataon’ny sampana mba hanaraha-maso ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny fiangonana 1 500 mahery any Ukraine, sy ny fanorenana Efitrano Fanjakana, ary ny fandikana boky ara-baiboly ho amin’ny teny iokrenianina, rômania (chokeshi, lovari), rômania (Ukraine), rusyn (Carpates), ary tenin’ny tanana rosianina.
Azo tsidihina koa ilay fampirantiana momba ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah any Ukraine. Azo atao koa ny mandehandeha irery eo amin’ilay toerana ary maka aina eo amin’ny toerana ho an’ny mpitsidika. Maharitra adiny roa sy sasany eo ho eo ny fitambaran’ny fitsidihana.
Hizara Hizara Birao sy Fitsidihana: Ukraine
Birao sy Fitsidihana: Ukraine